अर्थ Archives - Page3of 23 - RatoKalam.com is No one news portal.
धितोपत्र बजारमा आज शेयरको मूल्य ओरालो लागेको छ । मङ्गलबार उच्च अङ्कले बजार वृद्धि भएको भए पनि आज त्यो क्रम अगाडि बढ्न सकेन । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवारमापक नेप्से परिसूचक ७ दशमलव ५७ विन्दुले घटेर एक हजार १८७ दशमलव ९७ विन्दुमा झरेको छ । यस्तै...
व्यवसायीहरुको हितमा काम गर्छु : नवनिर्वाचित अध्यक्ष ऋषीराज तिम्सिना
देबु बानियाँ धुलावारी, २९ पुस । मेची उद्योग वाणिज्य संघका नव निर्वाचित अध्यक्ष ऋषीराज तिम्सिनाले सधैँ व्यवसायीहरुको हितमा काम गर्ने बताएका छन् । आइतवार सम्पन्न निर्वाचनबाट ३ वर्षका लागि संघको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका तिम्सिनाले निर्वाचनका समयमा पार्टीगत रुपमा उम्मेदवारी भए पनि राजनीतिक रङलाई संघको ढोकाबाहिर खोलेर सबै व्यवसायीहरुको हित हुने...
मेची उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा ऋषी तिम्सिना निर्वाचित
देबु बानियाँ धुलाबारी, २९ पुस । मेची उद्योग वाणिज्य संघ धुलाबारीको अध्यक्षमा सयुक्त व्यवसायी प्यानलका ऋषी तिम्सिना निर्वाचित भएका छन् । आइतवार सम्पन्न मतगणना अनुसार लोकतान्त्रिक प्यालनका पुनिकुमार वंशललाई ६ मतको झिनो अन्तरले पराजित गर्दै आगामी ३ वर्षका लागि तिम्सिना अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन । यो जितसँगै वाणिज्य संघमा २१ वर्षदेखिको...
वाणिज्य संघमा ८८ प्रतिशत मत खस्यो, मतगणना आइतवार बिहान ९ बजेबाट
देबु बानियाँ धुलाबारी, २८ पुस ÷ मेची उद्योग वाणिज्य संघ धुलाबारीको निर्वाचन शनिबार सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा ८८ प्रतिशत मत खसेको छ । कुल १ हजार ३ सय ७५ मतदाता रहेको उक्त निर्वाचनमा कुल १ हजार २ सय १४ मत खसेको निर्वाचन समितिका संयोजक अशोक पोखरेलले बताए । चुनावका लागि...
आम जनताको मन जित्दै सनराइज बैंक ७ वटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालन
देबु बानियाँ झापा । सनराइज बैंकले बुटवलमा प्रदेश न. ५ को प्रादेशिक कार्यलयको उद्घाटन गरेको छ । बुटवलसगै मुलुकका ७ ओटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरेको छ । बैंकले एक समारोहका बिच भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत प्रदेश नं १ को ईटहरी , प्रदेश नं २ को लाहान , प्रदेश नं ३ को...
कठमाडौं । बहुुराष्ट्रिय कम्पनीद्धारा प्रर्वधित स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकको बित्तीय अवस्था निकै नै खस्किएको छ । अन्य राष्ट्रमा रहेको स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक राम्रोसंग सञ्चालनमा रहेको भए पनि नेपालमा रहेको स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक भने व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण खस्किदै गएको छ । बैंकको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर रहेको र कर्मचारीहरुको चरम श्रम शोषण गरिरहेको चार्टड...
पुनित वंशल मेचीनगरका सफल व्यवसायीहरुको सुचीमा पर्ने नाम हो । झापाको मेचीनगरमा जन्मिएर ३६ वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आउनु भएको वंशल शुभ आषिश ट्रेडिङ कन्र्सन्टका प्रोपाइटर हुनुहुन्छ । उहाँले मेचीनगरका विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाको सफल नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ । २०५५ सालमै झापा उद्योग बाणिज्य शाखा धुलावारीको अध्यक्षको नेतृत्व सम्हालनु भएका...